Xildhibaanka laga soo doorto magaalada Victoria Sharmaake Dubow ayaa raaligalin ka bixiyay safarkii uu ku tagay Soomaaliya intii lagu jiray fasaxii sanadka 2020.
Sharmarke Dubow ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu socdaal ku tagay Bariga Afrika xilligii ciidaha si uu u booqdo qoys uusan arkin soddon sano.
“Waxaan qorsheynayay oo aan badbaadinaayay safarkan sanado badan waxaana dib ugu soo laabtay Bariga Afrika markii ugu horeysay tan iyo markii aan yaraa uga cararay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya sanadkii 1992.”
Dubow wuxuu sheegay inuu u hogaansamay tilmaamaha caafimaadka bulshada ee maxalliga ah intii uu maqnaa, waxaana laga baaray COVID-19 dhowr jeer, ka hor inta uusan ku laaban Canada Janaayo 4
Xildhibaanka ayaa hada ku jira karantiil huteel ku yaala magaalada Vancouver halkaas oo la geeyay adeegyada aasaasiga ah waxaana loo qorsheeyay inuu sii joogo labada todobaad ee soo socota ka dib markii uu maray tijaabooyin.
Guurtida waxay ku biirtay dhowr siyaasiyiin ah oo jabinaya xayiraadaha lagu soo rogay xaaladda Covid-19, iyo qaar ka mid ah kaalintii ay ku lahaayeen wax ka qabashada mid ka mid ah ayaa si isku mid ah dib loogu soo celiyay ka dib markii fadeexadaas aad u xoog badan.
Laakiin Sharmaake Dubow wuxuu ku adkeystay inuusan is casili doonin oo uu sii wadi doono matalaada deegaankiisa.
“Waxaan qirayaa inaan muujiyay go’aan liita oo aanan tusaale u noqonayn kiiskan. Waxaan fahansanahay in dad badan ay qaateen go’aanka adag ee ah inaysan booqan qoysaskooda bilihii la soo dhaafay.” ayuu qoray.
“Waan ogahay hada inay ahayd inaan isla go’aan qaato. Waan ka xumahay waxaana iga go’an inaan wanaag u sameeyo dhammaan dadka deggan Victoria.”
Dowlada dhexe ayaa kula talisay dadka reer Canada inta uu dillaacayo inay ka fogaadaan dhamaan safarada aan muhiimka aheyn waxayna soo bandhigtay shuruudo cusub oo tijaabooyin ah todobaadkan kuwa qorsheynaya inay ku safraan diyaarad
Saraakiisha laga soo doortay Ottawa, Ontario, Alberta, Saskatchewan iyo Quebec waxay la kulmeen cawaaqib safarka, qaar dibada ah, maadaama dawladuhu ka codsadeen dadka deegaanka inay joogaan si looga hortago faafitaanka COVID looga-19.
Rod Phillips, wasiirkii maaliyadda ee Ontario wuxuu khamiistii is casilay ka dib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tagay Caribbean-ka.